Tenga Yakagadzirwa Cartoon Chicken Ceramic Egg Yolk / White Separator - Kutakura Mahara & Hapana Mutero | WoopShop®
ruvara Yero pingi
Kugadzira Cartoon Chicken Ceramic Zai Yolk / Muchena Separator - Yero yakadzoserwa kumashure uye inotakura nekukurumidza painongodzoka muchitoro.
Mazai Ezviya Type: Egg Vakaparadzanisa
Chinyorwa: Chipurasitiki, Ceramics
Saizi: 1.96inch * 2.56inch
Basa: Egg Separator
Ruvara: yero, pingi
Zvishandiso: kupatsanura kweza chena uye mazai evha, Nyore Kushandisa
Iyo yekuparadzanisa mazai inoratidzira katuni huku chimiro, iyo izere nehunyanzvi uye cuteness.
Iparadzanisi yeza iri nyore kushandisa uye nyore kushambidza.
Neichi chishandiso chekugadzira, inogona kunyatso kukubatsira kupatsanura zai nekukurumidza.
Inokodzera kicheni, hotera, resitorendi zvichingodaro.
Pasuru Zviri Mukati: 1 x huku Zai Separator